ဟာလေဒက်ဗစ်ဆင် 2011 Road Glide Ultra FLRTU: Motorcycle Review – Yahoo… | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
Home → ဟာလေဒက်ဗစ်ဆင် → Harley-Davidson 2011 Road Glide Ultra FLRTU: မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - Yahoo...
ဟာလေဒက်ဗစ်ဆင် 2011 Road Glide Ultra FLRTU: မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း – Yahoo…
6 မေ 2015 | Author: dima | Comments Off on ဟာလေဒက်ဗစ်ဆင် 2011 Road Glide Ultra FLRTU: မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း – Yahoo…
The fairing, described in greater detail by Smartcycleshopper. has dual headlights and cockpit-style instrumentation. It offers good wind deferral to speeds of about 60 တစ်နာရီမိုင်, when the rider will start feeling some buffeting. The Road Glide Ultra FLRTU’s fairing assembly is mounted to the frame, not the forks, putting minimal weight on the front wheel, allowing easier turning.
The one-piece Electra Glide saddle, with its deeper bucket and narrower width, assures greater ground reach. Estimated mileage is 35 mpg city driving, နှင့် 54 mpg highway driving.
Basem Wasef. 2011 Harley-Davidson Road Glide Ultra ဆန်းစစ်ခြင်း
Harley rocker ထိုင်ခုံအသေးစိတ်ဖော်ပြချက် eHow
Other articles of the category "ဟာလေဒက်ဗစ်ဆင်":
အဆိုပါ 2009 Harley Davidson လမ်းမကြီးမှာဘုရငျ – Yahoo V...
20.06.2015 | Comments Off on အဆိုပါ 2009 Harley Davidson လမ်းမကြီးမှာဘုရငျ – Yahoo ကအသံများ – voices.yahoo.com
18.06.2015 | Comments Off on 2010 Harley-Davidson XR1200X မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဓာတ်ပုံနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ, price…
ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down စမတ် eScooter ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို Moto Guzzi 1000 Daytona Injection KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto Brammo Enertia အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic စက်ဘီး Kawasaki ER-6n Ducati Diavel စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး Aprilia Mana 850 တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် Bajaj Discover ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 Ducati Desmosedici GP11 Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် ဆူဇူကီး Colleda CO Ducati 60 ဆူဇူကီး AN 650 သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် ဟွန်ဒါ DN-01